बैतेश्वर गाउँपालिकाको भवन सम्पन्न हुँदै
दोलखा (अस) । देशका विभिन्न स्थानीय तहहरू केन्द्र विवादमा अल्झिरहेको बेला दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले भने आफ्नै भवन निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीयले निःशुल्क प्रदान गरेको जग्गामा गाउँपालिकाले मुख्य कार्यालय भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।
बैतेश्वर गाउँपालिका–६ को पाँडुडाँडामा गाउँपालिका केन्द्र स्थापनाका लागि स्थानीय बासिन्दाले करीब ५२ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाका नाममा निःशुल्क प्रदान गरेका थिए । सोही स्थानमा करीब २० रोपनी सार्वजनिक जग्गा समेत छ । उक्त जग्गामा गाउँपालिका केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणाधीन रहेको र कतिपय सम्पन्न हुन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाले बताए । मङ्सिर मसान्तसम्ममा गाउँपालिकाका सबै संरचना निर्माण सम्पन्न भएर प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए ।
रू. १ करोड ६८ लाख लागतमा निर्माणाधीन कार्यालय भवनको हाल फिनिसिङको काम भइरहेको गाउँपालिकाले बताएको छ । फिनिसिङपछि स्टिल पार्टेशन गरी कार्यालयका लागि आवश्यक कोठा तयार गरिनेछ । कार्यालय भवन निर्माण समयमै सम्पन्न गरी सहज र प्रभावकारी रूपमा कामकारबाही सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन खड्काले बताए । प्रशासकीय भवनका अतिरिक्त पाँडुमा रू. ८६ लाख लागतमा निर्माणाधीन कोल्डस्टोर पनि अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाले बताएको छ । यस्तै प्रदेश ३ सरकारको रू. ४४ लाख अनुदानमा ‘शहीद रीतबहादुर खड्का स्मृति सभा भवन’को पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
लामोसाँघु– सिंगटी प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति ९० %[२०७६ फागुन, ५]
वाग्मती प्रदेश हेटौंडा–धुलिखेल विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा [२०७६ फागुन, ५]